CC Warsame oo laga xaal mariyey tuhunkii la xiriiray Kiiska Badda | KEYDMEDIA ONLINE
CC Warsame oo laga xaal mariyey tuhunkii la xiriiray Kiiska Badda
Mustaqbalka iyo hanka siyaasadeed ee CC Warsame ayey arintaasi saameyn xoogan ku yeelatay, waxana weedho xanaf leh oo isaga ka dhan ah Baraha Bulshada ku daabici jiray koox mareegaha xiriirka bulshada ku dagaalanta oo ay dowlada iminka waqtigeedu dhamaaday dhaqaale xoogan ku bixisay aas aaskeeda.
MUQDISHO, Soomaaliya - In ku dhaw 12 sano ayaa Siyaasiga Cabdiraxman Cabdi shakuur Warsame lagu tuhmayey inuu yahay shaqsiga saxiixiisu uu muranka galiyey badda Soomaaliya,kadib heshiis is af-garad ah oo ay sanadkii 2009-kii wada saxiixdeen Dowladii KMG ahayd iyo Xukuumada Nairobi.
Is-afgaradkkaas oo ku qotomay in labada dal ay ka wada hadli karaan marin biyoodki lagu muransanaa ayey Barlamankii 8-aad ee xiligaasi jiray ku macneeyeen mid lagu iibsanayo bada Soomaaliya, waxana ay taasi sababtay in eed iyo dhaleeceyn aan kala joogsi lahayn loo gaysto C/raxmaan C/shakuur Warsame.
Kadib xukunkii Maxkamada oo ay qareenada qaar fasiraad ka bixiyeen nuxurka is af-garadkaasi iyo kaalinta uu ku yeeshay dacwada, ayaa soo de-dejisay in dad badan oo Soomaali ay faham ka helaan ujeedkii is-afgaradkaasi,taasoo noqotay waa cusub oo u baryey hogaamiyaha Xisbiga Wadajir.
Kulanka lagu xaal marinayey Musharax Madaxweyne C/axmaan C/shakuur ayaa waxaa soo qaban qaabiyey Midawga Musharaxiinta, waxana dadkii madasha ka hadlay ay uga mahad celiyeen dulqaadkii uu muujiyey muddadaasi aadka dheer.
Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ahayd Xildhibaanada Barlamanka iminka waqtigiisu dhamaaday ayaa goobta ka sheegtay in CCW ay guusha dhanka dacwwda badda muuhimad weyn ugu fadhisay,maadama siyaasiga lagu eedeynayey sanaddo badan arimo uusan maasuul ka ahayn ama si qaldan bulshada looga dhaadhiciyey.
Siyaasiga C/raxmaan Odowaa, ayaa isaguna tilmaamay in dowlada kenya ay ka qoomameyneyso saxiixii is-afgaradkasi iyo aaddistii Maxkamada ICJ, maadaama in muddo ah ay rumeysneyd in marin biyoodkasi ay iyadu leedahay, isla markaana si sharci darro ah heshiis kula gashay shirkado qoda shidaalka.
Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa cod dheer ku sheegay in ay cafis ka tahay dhankiisa cid walba oo arintaasi ku tuhmeysay ama si shaqsiyan ah u weerartay sumcadiisa qofnimo,waxana uu bulshada kula dardaarmay in ay ka fogaadaan wax kasta oo dhaawici kara sharafta muwaadinka Soomaaliyeed.